निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे निलम्बित एसपी विष्ट के भन्छन् ? (भिडियोसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७५ आश्विन २५ गते प्रकाशित, l २३:१६
कञ्चनपुर प्रकरणमा निलम्बित एसपी डील्लीराज विष्टसँग पत्रकार ऋषि धमलाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याबारे सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता लिएका छन् । प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वास्तविकता के हो ? जनता जान्न चाहन्छन् ?
उनले भने, कञ्चनपुर जिल्ला चुनौतिपूर्ण जिल्लाको रुपमा मानिन्छ । म करिब करिब पुषको अन्तिमतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । र, त्यसपछि पुषदेखि असारसम्मको शान्ति, सुरक्षाको अवस्था एकदमै राम्रो थियो । एकदम सुदृढ थियो । साउनको पहिलो हप्तामा भीमदत्त नगरपालिकाले कर वृद्धिको निर्णय गर्यो । त्यसको विरोधमा ट्याक्सी, टेम्पो, अटो रिक्सा, ट्यांकर आदिले आन्दोलनको घोषणा गरे । विभिन्न समूहले त्यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाए । त्यसले नगरपालिकामा अलिकति तनाब हुन खोज्दाखेरी सामान्य लाठीचार्ज भयो । यसले गर्र्दा सदरमुकाम अलिक तनाबपूर्ण भयो ।
जनता जान्न चाहन्छन ~ प्रत्यक्ष प्रसारण
निलंबित एसपी दिल्ली राज बिष्टको सनसनीपूर्ण खुलासा जनता जान्न चाहान्छन ऋषि धमलाको साथमा एसपी दिल्ली राज बिष्ट मात्र प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको फेसबुक लाइभमा ।जनता जान्न चाहन्छन ~ प्रत्यक्ष प्रसारणसक्दो सेयर गरम !!
Posted by Prime Times Television, Nepal on Thursday, October 11, 2018
तर, साउन १० गते निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यो भयो ? यो कसले गर्यो ?
सबैभन्दा पहिले प्रसँग चाहीँ त्यहीबाट आयो । पहिले आन्दोलन नगरपालिकाको विरुद्धमा भैरहेको थियो । त्यसमा तोडफोड र आगजानी हुन नदिन प्रहरीको दायित्व थियो । साउन ६, ७ गतेको आसपासमा लाठीचार्ज भएको छ । र, त्यसपछि आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ । त्यसको लगत्तै यता निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । घट्ना यही हो भन्नु भन्दापनि घट्ना कसरी भयो भन्ने कुरा हो ।
कसरी भयो त घट्ना ? र घट्नामा को को संलग्न छन् ? त्यो पनि बताउनुपर्छ ।
घट्नामा संलग्न भनेको त अनुशन्धानबाट खुल्दै जाने कुरा हो । खुल्दै थियौं हामी । अहिलेपनि अनुशन्धान चलिरहेकै छ । केही शंकास्पद व्यक्तिहरुको अनुशन्धान भैरहेको छ । तर, घट्ना चाहीँ कसरी भन्ने हिसाबमा चाहीँ अब त्यतिवेला साउन १० गते दिउँसै घट्ना घटेको देखिन्छ । दिँउसो ११ बजे ट्युसन पढ्न गएको अवस्था, सवा २ बजे त्यहाँबाट निस्किएको अवस्था हो नि । सवा २ बजे त्यहाँबाट निस्किएको भनिएको छ । अनि ४ बजे केही महिलाहरुले त्यो साईकल देखेको अवस्था छ । ट्युशनको समय र साईकल देखेको समयावधि हेर्ने हो भने जम्मा ४ घण्टाको डिफेरेन्सेस देखिएको छ ।
त्यतिवेला नेपाल प्रहरी कहाँ थियो ?
नेपाल प्रहरी त्यतिवेला कार्यक्षेत्रमै थियो । र, काम गरिरहेकै अवस्था थियो । त्यतिवेला हराएको जानकारी थिएन । हराएको भनेर त रातिमात्रै जानकारी आएको हो ।
हराएको भनेर कति बजे जानकारी पाउनुभयो ?
मैले त अब, त्यहाँ अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ । उक्त प्रहरी पोष्टले साँढे १२ बजे वा १२ः३५ बजे उहाँहरु खोज्दै आएको कुरो जानकारीमा आएको छ ।
अनि तपाईले अपराधीलाई पक्राउ गर भनेर निर्देशन दिनुपर्दैन ?
उहाँहरु आउनुभयो । त्यहाँ सई साहब कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुसँग कुरो भयो । भोलि विहान ४ बजे नै जाने (जुन घरमा ट्युशन पढ्न) गएको थियो । त्यहाँ जाने कुरा भएको थियो । र, सर्च गर्ने कुरा थियो । उहाँहरुको बीचमा सहमति भयो ।
तर, तपाईले जान दिनुभएन अरे नि ? रोक्नुभयो अरे ?
होईन । मैले रोकेको छैन । ईन्स्पेक्टर साहपलाई वडा प्रहरीको ईन्सपेक्टर सापको जिम्मेवारी क्षेत्रपनि हो । गृहक्षेत्रपनि हो । त्यो खेतवारीपनि उहाँको हो ।
NOTE: अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश भोलि प्रकाशित हुनेछ
२०७५ आश्विन २६ गते सम्पादित l १३:५१